Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoha Hery Rajaonarimampianina: Hiara-dia amin’ny « Brics » ?
Filoha Hery Rajaonarimampianina: Hiara-dia amin’ny « Brics » ?
Inona moa ny “Brics” ? Ny “Brics” dia ilay rafitra iombonan’ireo firenena misandratra miisa dimy, dia i Brezila, Rosia, Inda, Shina ary i Afrika Atsimo.
Niainga avy amin’ny fahatsapan’ireo firenena ireo ny fanaovan’ny firenen-dehibe hafa ampihimamba ny fiaraha-miasa ao anivon’ny Andrim-bolan’i “Bretton Woods”, dia ny Banky iraisampirenena (Banque Mondiale) sy ny Tahirim-bola Iraisampirenena (FMI) no nifanatonan’ireo firenena dimy ireo ka nahatonga ny “Brics”.
Tsy levon’ny vavonin’ireo firenen-dehibe mpiara-dia sy mpanao ampihimamba ny Banky Mondialy sy ny FMI ny fijoroan’ny Brics satria hanozongozona ny fanaovany ho eo ambany vahohony an’izao tontolo izao, ka mitady ny fomba maro hamotehana ny Brics ny firenen-dehibe tandrefana. Dia ireny niarahantsika nahita tato anatin’ny taona vitsivitsy ireny ny famotehana an’i Brezila. Io koa ny ao Afrika Atsimo tamin’ny alalan’ny paika maloto nanesorana ny filoha Afrikanina Tatsimo, Jacob Zuma. Efa mikaro-dalana hamotehana an’i Shina sy Inda koa ry zareo tandrefana mba tsy haatafavoaka velona ny “Brics”.
Maro mantsy ireo firenena vao misandratra mandrafitra fiaraha-miasa amin’ny “Brics”; ary tsy vitsy ireo firenena efa resy lahatra fa tsy vahaolana ny maty ankazo tokana amin’ny andrim-bolan’i Betton Woods. Nisy ny efa nanilika azy ireo mihitsy ka nahavita nampibaribary fa “azo atao tsara ny misandratra nefa tsy eo ambany elatry ny andrim-bolan’i Bretton Woods”. Isan’ny firenena afaka nampibaribary ny fahafahany mivelatra sy mandroso ary manarina ny fiaina’ny vahoaka ao aminy i Bolivia sy i Venezoela. Dia efa mitady ny fomba hafa hamotehana izany ezaka mitera-pahombiazana ho an’ny vahoaka ao amin’ireo firenena ireo izany ny firenen-dehibe mpanao ampihimamba sy mametraka ho eo ambany vahohony an’izao tontolo izao.
Amin’izao fotoana dia tsikaritra ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena toa misarisary zoro amin’ny Brics ny filohampirenena Malagasy Rajaonarimampianina. Tao anatin’ny fandaharana “Fotoam-bita” omaly zoma, ohatra, dia natsidiny izay fifanatonana eo amin’i Madagasikara amin’ireo firenena miara-dia ao amin’ny Brics izay. Efa tany Shina aho, hoy i Hery Rajaonarimampianina, vao herinadro lasa no tany Rosia koa. Efa nifandray matetika tamin’i Afrika Atsimo, ary vao ny alakamisy teo no nandao an’i Madagasikara ny filohampirenena Indianina.
Tsy vitsy ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena no mahatsapa ny mety haha-vahaolana amin’ny fiarahana amin’ny “Brics”, indrindra fa efa hita ny voka-dratsin’ny fiarahana tamin’i “Bretton Woods”.
Ny tsy azo hamaivanina anefa dia mitady lalana hizahozahoana ho mahay mifandray amin’ny vazan-tany efatra i Hery Rajaonarimampianina. Pôlitika efa nampiharin’ny Amiraly Ratsiraka teto izany tamin’ny Repoblika faharoa, ary tena isan’ny filohampirenena nikoizan’ny maro ny Amiraly Ratsiraka amin’ny resaka diplaomasia, saingy hatraiza ny fahombiazan’izay fifandraisana amin’ny vazan-tany efatra izay tamin’izany ?
Noho izany, tokony hanana safidy ihany i Hery Rajaonarimampianina na hiankohoka hatrany amin’i Bretton Woods na hifindra lasy hirona amin’ny Brics.
Na izany na tsy izany, tokony tsy hadinoina fa na ny Bretton Woods na ny Brics dia samy efa mametraka ny teti-panorony avy ka hampiseho endri-pananiham-bohitra vaovao aty amin’ny firenena madinika toa an’i Madagasikara, indrindra fa fantatr’izy rehetra ireo ny fananan’i Madagasikara harena tsy hita pesipesenina.
Tsy voatery hanapaka ny fifandraisana sy fiaraha-miasa amin’ny any ivelany isika Malagasy, noho izany, saingy tokony ho mpitondra tena tia tanindrazana sy tsy miankin-doha amin’ny any ivelany toa ny mpitondra rehetra efa nifandimby nitantana teto no mitana ny fahefam-panjakana indray. Hatramin’izao andron-dRajaonarimampianina izao mantsy dia tsy mbola nisy pôlitika niova teo amin’ny fifandraisantsika amin’ny any ivelany fa ny fiankina-doha amin’ireo mpampisambo-bola mahazatra hatrany. Mpitondra tena manaja sy saro-piaro amin’ny lanjan’ny fiandrianam-pirenena no takiana, ankoatra ny tsy fiankinan-doha sy ny tena fitiavan-tanindrazana ao aminy. Hanana fahasahiana hiantehitra amin’ny tena herim-bahoaka eto sy ny harena misy eto ny mpitondra mahafeno an’ireo fepetra ireo, ka tena fiaraha-miasa amin’ny maha-fanampiana azy sy fiarahamikatsaka ny tombontsoa iombonana no hany hifandraisana amin’ny firenen-dehibe, na ny hatrizay io na ny Brics.
Ny efa hita porofo kosa anefa aloha dia ireo mpitondra rehetra efa nifandimby teto, hatramin’izao filoha Rajaonarimampianina izao, dia tsy misy mahafeno na ny ampahefatry ny fepetra takian’izany tena fitiavan-tanindrazana sy tsy fiankinan-doha amin’ny any ivelany ary fahasarotam-piaro amin’ny fiandrianam-pirenena izany.